रुपलाई दिया साथ,गलत समाचार लेख्ने ९ अनलाइल विरुद्द दिइन उजुरी : काे काे जाने भए त जेल ?
June 28, 2021 khabarmazzakoLeaveaComment on रुपलाई दिया साथ,गलत समाचार लेख्ने ९ अनलाइल विरुद्द दिइन उजुरी : काे काे जाने भए त जेल ?
असार १२, २०७८ काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले आफ्नो च’रित्र ह’त्या गरेको भन्दै ९ वटा अनलाइनवि’रुद्ध उ’जुरी दिएकी छन् । युरोपियन युनियन (ईयू)बाट डेढ करोड रुपियाँ लिएको भन्दै समाचार लेख्ने ९ वटा अनलाइन बि’रुद्द प्रेस काउन्सिल नेपालमा उ’जुरी हालेकी हुन् ।
ती अनलाइन पोर्टलहरुले विभिन्न जा’तजाति, धर्म, वा स’म्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा ख’लल पुर्याएको र आफ्नो च’रित्र ह’त्या गरेर समग्र स’मुदायमाथि नै हिं’सा गरेको भन्दै सा’इबर अ’पराधअन्तर्गत का’रबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलमा उनले उ’जुरी दिएकी छन् । जा’तीय दू’व्र्यव’हार भए पछि वि’रोधमा उ’त्रिदा उनीमाथि ती अनलाइनहरुले कसैबाट परिचालन भएको भन्दै भ्रा’मक समाचार लेखेको उनले भनेकी छन् । नेपाल पाना अनलाइनले उनीमाथि यु’रोपियन युनियन (ईयू) बाट डेढ करोड रुपियाँ खाएको आरोप लगाएको छ ।
देश तथा विदेशमा चर्चित लाेकदाेहाेरी गायिका ज्याेती मगर र आधनिक गायक शिव परियार यतिवेला फेरि निकै चर्चामा आएका छन । सारा नेपालीले उनिहरुकाे समर्थन गरेका छन । पछिल्लाे चरण जातिय विभेद गर्नेहरु सल्वलाइ रहेकाे वेला उनिहरुले भने जातिय विभेद गर्नेहरुकाे व्यापक विराेध गरेका छन ।
ज्याेती मगरकाे धारणा तर्फ प्रवेश गराैँ । ज्याेती मगरकाे शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ र पुर्व सचिव उपाध्यायलाई यस्ताे सन्देश : तपाई मानिस त हाे ?
उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत आफ्नाे धारणा सार्वजिक गरेकी हुन । मगरले भनेकी छिन, तर्क गर्न सक्ने क्षमता छ भन्दैमा गलतलाइ सहि र सहिलाइ गलत सावित गर्न खाेज्ने सबै समाज भडुवा हुन । उनी रुपा सुनार पक्षमा उभिदै भनेकी छिन, जति नै तर्क वितर्क गरेर सामाजिक सञ्जालमा भुके पनि रुपा सुनार कामी भएकै कारण प्रधानकाे घरमा काेठ नपाएकाे प्रष्ट छ । आजकाे युगमा पनि यस्ता घटना हुनु निन्दनिय हाे । रुपाले न्याय त यत्रै सिटी पाकाे पाइ हाे भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकाय प्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरेकी छिन ।
पिडितले न्याय पाउनेमा विश्वस्त नभएकाे उनकाे तर्क रहेकाे छ । उनले भनेकी छिन, पिडितले न्याय त पाकाे पाइ हाे अब यही कुरा लिएर कुन चाही नेताले राजनिती काे मुद्दा बनाउछ र भुक्छ अनि फेरि रुपा जस्ता उत्पिडितकाे सिकारहरु काे भावना संग खेल्छ । उनले रुपाकाे विरुद्द वाेल्नेहरुलाइ कडा प्रहार गरेकी छिन । विशेष गरि अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुर्व सचिव भिम उपाध्याय, चर्चित नायिका करिष्मा मानन्धर र नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गाेपाल श्रेष्ठ जातिय विभेद गर्नेकाे खुलेर समर्थन गरेका छन ।
उनीले व्यङ्ग्यात्मक रुपमा भनेकी छिन, जाे चाेर उसकै ठुलाे श्वर, केरा जस्ताे कति बकम्फुसे तर्क गरेकाे हाै फेशबुमा, सक्छाै सहि लाइ साथ देउ सक्दैनाैँ गलतलाइ पनि साथ नदेउ र अन्तमा मान्छे बाट सकारात्मक र जनावरहरु बाट नकारात्मक कमेन्ट काे अपेक्षा गर्दछु । मगरले फेशबुक स्टाटसकाे अन्तमा रुपा सुनारकाे पक्षमा र जातिय विभेद र जातिय विभेद गर्नेहरुकाे विरुद्दमा उभिएकी छिन । उनले रुपा सुनारकाे पक्षमा उभिदै लेखेकी छिन, आइएम विथ रुपा सुनार । नेपालीका उल्था गर्दा म रुपा सुनारकाे पक्षमा छु भन्ने अर्थ लाग्द छ ।
ज्याेती मगरले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा राखेकाे जस्ताकाे त्यस्तै तर्क यस्ताे रहेकाे छ ।
तर्क गर्न सक्ने क्षमता छ भन्दै मा गलत लाई सहि र सहि लाई गलत साबित गर्न खोज्ने सबै समाज भडुवा हुन । जति नै तर्क बितर्क गरेर सामाजिक सन्जाल मा भुके पनि रुपा सुनार कामी भाकै कारण प्रधान को घर मा कोठा नपाको प्रष्ट छ । आज को युग मा पनि यस्ता घटना हुनु निन्दनीय र अमानविय हो । रुपा ले न्याय त यत्रै सिटी पाको पाई हो अब यहि कुरा लियर कुन चै नेता ले राजनीति को मुद्दा बनाउछ र भुक्छ अनि फेरि रुपा जस्ता उत्पीडन को सिकार हरु को भावना सङग खेल्छ । जो चोर उस्कै ठूलो स्वोर, केरा जस्तो कति बकम्फुसे तर्क गरेको हौ फेस्बुक मा, सक्छौ सहि लाई साथ देउ सक्दैनौ गलत लाइ पनि साथ नदेउ र स्टाटस को अन्त मा मान्छे बाट सकारात्मक र जनाबर हरु बाट नकारात्मक कमेन्ट को अपेक्षा गर्दछु । आइ एएम विथ रुपा सुनार ।
उनकाे याे स्टाटसले सारा नेपालीकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे छ । देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कलाकार भनेकाे ज्याेती मगर जस्ताे विभेद विरुद्द वाेल्न सक्ने हुनुपर्छ भन्दै समर्थन गरेका छन र साथ दिने वाचा पनि गरेका छन । देशका मन्त्री र नाम चलेका केही व्यक्तिहरु जातिय विभेद गर्नेहरुकाे समर्थन गर्दै सत्ताकाे दुरुपयाेग गरेर कानुनी प्रकृयामा नगइ प्रहरी चाैकी बाटै छुटाएर ल्याएका छन । यी र यस्ता प्रवृतीहरु विरुद्द नै प्रतिवाद गर्न ज्याेती मगरले यस्ताे धारणा राखेकाे सबैकाे बुझाइ रहेकाे छ ।
चर्चित कलाकार शिव परियारकाे जातिय विभेद सम्बन्धी धरणा यस्ताे छ ।
उनकाे मुख्य धारणा भनेकाे विभेदकाे नयाँ तरिका समाजमा देखा परेकाे र याे झन घातक भएकाे भन्ने छ । मिठाे वाेलेर हाेस वा चर्काे वाेलेर हाेस विभेदका कुनै पनि प्रकारहरु समाजमा स्विकार गर्न नसकिने र यसकाे लागि विराेध त हुन्छ नै भन्ने छ । पहिलेका बा, हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द वचन वाेलेर बिभेद मात्रै विभेद थियाे, अहिले त माया गरेर वाेलेर नरिसाउ भन्दै विभेद गरेकाे देखिन्छ र याे विभेदकाे नयाँ तरिका हाे भन्ने धारणा छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा राखेकाे धारणा जस्ताकाे तस्तै यस्ताे रहेकाे छ ।
बिभेदका बिषयमा मेरो कुरा : शिव परियार
नरिसाउँ ल नानि,बरु एसो बस्ने अरु सथि खोजिदेउ है,एसो आउँदै गर है ।
कामि भन्ने बित्तिकै म झस्कें ।
बा, हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द गालि वचन बोलेर गरेको बिभेद मात्रै बिभेद थियो, अहिले त माया गरेर बोलेर पो ब्यबहार गरेको रहेछ नि, यस्तो नि बिभेद हुन्छ र ? भन्ने पुस्ता एसपटक सामाजिक सन्जालमा धेरै देखिए । यो अहिलेको पुस्ताले चैं बिभेद गर्ने शैलिमा अलिक आधुनिकता भित्र्याएको पाईयो । जस्तै हुन्छ नि माया गरे जस्तो गर्दै बिभेद कायम राख्ने खतरनाक बिभेदको आधुनिक शैलि ।
गालि गरि गरि घाटि रेटे पनि, अथवा ग्वाम्लाङ्गै अङ्गालो हालेर, गालामै च्वाप्प च्वाप्प मोई खाँदै ,घाटि रेटे पनि परिणाम त आखिर मृत्यु नै हो । तर माया गरेको रैछ नि त, चुम्मा पनि त खाकै रहेछ, तेस्ले घाटि रेटेर मारेको पनि मारेको हो र ? रिसाको, गालि गलौज त्यस्तो केहि गरेको थिएन त, कति राम्रो संग म्वाई खाएर घाँटि रेटेको रहेछ नि, त्यसरि रेटदा पनि मृत्यु हुन्छ र ?
अशान्ति भो, सामजिक सदभाव खल्बलियो, यस्तो के गरेको भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हिजो आफुलाई उच्च जात भनिने पुस्ताले, हिजोको कथित तल्लो जात भनिने पुस्तालाई, बिभेद गर्दा, कथित तल्लो जात बनाईएका पुस्ताले प्रतिबाद या बिरोध गर्न सकेनन । आफु माथि भएको बिभेद सहन बाध्य भए, किनकि उनिहरुलाई कानुन बनाएर हात खुट्टा बाधिएको थियो,अत्यन्तै कमजोर बनाईएको थियो । आफु माथि जबर्जस्ति लादिएको बिभेदको प्रतिबाद गर्न नसक्ने अवस्थामा, बिभेद सहन बाध्य पारिएका बर्गले बिभेद सहिदिएकै कारण समाजमा कथित उच्च बर्गले शान्ति महशुस गरे ।
किनकि उनिहरुलाई आफ्नो शान्तिको मात्र चिन्ता थियो । आफुलाई उच्च जातको मसिहा मान्नेले बोलि बचन र जुत्ताको नोकले कथित तल्लो बनाईएका जाति माथि प्रहार गरिरहेर आफ्नालागि निर्माण गरेको शान्ति ति जातिय उत्पिडित बर्गलाई त सधै मुर्दा शान्ति झैं महसुश भैरह्यो । तर आज समय फेरिएको छ । गाउँ गाउँ, शहर शहरमा धेरै रुपा सुनारहरु छन । उनिहरु छदम भेषि सोचलाई बुझ्न चुक्दैनन । अन्याय सहदैनन । बिरोध गर्छन । अनि आज पनि आफु उच्च भई राखेर अरुलाई निचको दर्जामा देखिरहन चाहनेहरुको फेरि टाउँको दुख्न सुरु हुन्छ ।
‘नरिसाउँ ल नानि’ भनि भनि आधुनिक शैलिमा बिभेदलाई निरन्तरता दियि नै रहने हो भने यो बिभेद समाजमा राखिरहेसम्म सरस्वति प्रधान र रुपा सुनार चरित्रको द्वन्द समाजमा जारि नरहला भन्न सकिन्न र त्यो पक्कै पनि नेपालि समाजका लागि हितकर हुने देख्दिन म । त्यसैले आमा,बाबा, हजुरआमा हजुरबुवाका अपराध अपराध नै होईन भन्ने कुतर्क छोडेर जातिय समता कायम गर्ने बाटो तर्फ सबै नेपालि लाग्न जरुरि छ । किन भने उत्पिडित बर्गले छदम भेषि जातिया समानता खोजेको हैन । राज्य, समाज र ब्यक्तिबाट मान्छेले मान्छेलाई गर्ने समता मुखि ब्यबहार अपेक्षा गरेको हो ।
पहिलो कुरा यो दलित भन्ने शब्द बर्ग वा सम्प्रदाय होईन । यो बिभेद अन्त्यकालागि संघर्ष गर्न बनाईएको सांगठनिक मोर्चाको नाम हो । हिजोको दिनमा समाजले पानी चल्दैन है भनेर चरम जातिय बिभेद गरेका नेपालका करिब 20 देखि माथि जातहरुको साझा संगठन हो दलित । जातिय बिभेद बिरुद्द जातिय समानता होईन कि जातिय समताको लागि यसको आन्दोलन जारि छ । यहाँ खै किन हो पछिल्लो चरणमा दलित दलित समुदाय भनेर यसलाई जात नै बनाईएको छ यो गलत छ । २०६२/२०६३ पछि बनेको गनतान्त्रीक सरकारले हिजो चरम बिभेद भोगेका दलित,मधेसि, जनजातिलाई बर्ग उथ्थानको लागि आरक्षण ब्यवस्था गरेको हो,समाबेशि हैसियतमा कोटा उपलब्ध गराएको हो । जसमा दलितको जम्मा ९ प्रतिशत पर्दछ ।
तर आफुलाई सर्वहारा जनताको मसिहा ठान्ने सरकारले अहिले त्यो पनि पुर्ण कार्यन्वयन गर्न बन्द गरेको छ । हरेक बिभेदको घटनामा एउटा सामन्त बर्गको पिढि सामाजिक संजालमा कोटा खारेज गर, दलित कोटा खारेज गर भनि भनि कुर्लन्छ । उसको मुख्य टार्गेट नै दलित कोटा खारेज गराउँनु हो । उसले महिला आरक्षण खारेज गर भन्न सक्दैन किनकि महिला आरक्षणका नाममा त ३३% उसैको बर्गको प्रतिनिधित्व छ ।
यो बिषयमा बोल्दा उसको आफ्नै बर्गको टाउँको फुट्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, त्यै भएर डराँउछ, उसले जनजातिको आरक्षणको बिषयमा त झन बोल्ने कुरै भएन एक नं. प्रदेश नै बन्द हुने सम्भावना भो, जनजातिहरुहरुसंग भिड्न अलि आँट पुगेन उसको, अब आयो मधेसि समुदाय अहिले तराईका मधेसि समुदायको आरक्षण कतौटिका बिषयमा उसले चुईक्क बोल्न सक्दैन, किनभने देश नै दुइटा बनाउँछु भन्ने थ्रेट र तराई झर्नै बन्द हुने अवस्था आउंन सक्दछ ।
त्यसैले अब बाँकि को रह्यो भन्दा हिजो चरम जातिय बिभेद गरेर दासत्व स्विकार गर्न बाध्य पारिएका दलित, यिनिहरुलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ ,यिनिहरुलाई जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने सोचका साथ दलित कोटा खारेज गर भन्ने अभियानका साथ निशाना साँधिएको छ । के २०६२/६३ अगाडि भिभेद थिएन ? दलितको कोटा खारेज हुने बित्तिकै सबले समता मुलक आधिकार पाउँछन ? जातिय समता सहितको समानता कायम हुन्छ ?
कदापि हुदैन, यो त जातिय रुपमा हिजो दबाईएका, दलनमा पर्न बाध्य बनाईएका, मान्छे पनि होईन कि चरम जनावर भन्दा पनि निच ब्यबहार खप्न बाध्य पारिएका, दलितका आजका पुस्ता, जो समाजमा शिक्षित भएर बोल्न थाले, उनिहरुको पनि पहुँच पुग्न थाल्यो, उनिहरु पनि हजुर हजुर गरेर टाउँको निहुर्याएर बोल्नुको सट्टा आँखामा आँखा मिलाएर ब्यबहार गर्न थालेपछि, अहो अब हाम्रो भाग खाने भो, भन्ने डरले फेरि उनिहरुलाई त्यहि दासत्वको जिवन बाँच बाध्य पारिनका लागि सामन्त जहिले पनि कोटा खारेज गर भन्दै छ ।
उस्ले जातिय बिभेद हुनु हुँदैन भन्दैन बरु कोटालाई कोठासंग जोडेर बहस गर्छ यो त्यै सामन्तको पिढि हो जसले हिजो मान्छे लाई मान्छे बन्न नदिएकै कारण आज देशमा यत्रो परिवर्तन भै सक्दा पनि एउट बर्ग हरेक दिन मान्छे हुँ म भनेर आफ्नो अस्तित्व मान्छे भएको संसारलाई बताउँन बाध्य छ । आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पतिलाई यदि कसैले आम्दानि गर्नकै लागि सेवाको माध्यम अपनाएर पब्लिक प्लेट्फर्म सम्म लान्छ भने चाहे मिठो बोलेर होस चाहे तितो बोलेर होस त्यँहा जातिय बिभेद गर्न पाईन्दैन ।
जातिय विधेद गर्नेकाे पक्षमा नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री देखि काे काे लागे त याे पढ्नुस ।
आफुलाइ कम्युनिष्ट ठान्ने नेकपा एमालेका नेता तथा नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गाेपाल श्रेष्ठ, गाँजा खेतिकाे लागि देशभर अभियान चालेका नेपाल सरकारका पुर्व सचिव भिम उपाध्याय तथा चर्चित नायिका करिष्मा मानन्धर अहिले जातिय विभेद गर्ने र समाजमा हिंसा फैलाउने गतिविधीका कारण जनताकाे नजर बाट गिरेका छन भने चर्चित गायिका ज्याेती मगर विभेद विरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत भएकाे कारण सारा नेपालीले समर्थन गरेका छन ।
यतिवेला जातियता सवालमा समाजिक सञ्जालमा निकै वहस भइरहेकाे छ । केही समाजका कथित सामाजिक अभियन्ताहरु हिंसा नियण्त्रणमा लानुकाे साटाे झन हिंसा फैलाउन प्राेतसाहत गरिरहेका छन । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका पाेष्टहरु गर्दै जङ्ग वहादुर राणाले सञ्चालन गरेकाे जातिय प्रथालाइ २१ साैँ सताब्दीमा मलजल लाउने काम गरिरहेका छन । त्यतिमात्रै हाेइन सरकारकै मन्त्रीले खुलेआम जातिय विभेद गरेका छन ।
लामाे समय सम्म कम्युनिष्ट पाटीकाे राजनिति गर्दै जनता समक्ष हरेक किसिमका विभेद विरुद्द लड्ने वाचा गरेर जनताकाे मत प्राप्तगरि सत्तामा पुगेका एमालेका नेता तथा हाल नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गाेपाल श्रेष्ठले जातिय विभेद गरेकाे आराेपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाइ सत्ताकाे दुरुपयाेग गर्दै सरकारकै झण्डावाल गाडिमा सवार भएर छुटाएका छन भने सरकारकै गाडिमा घरसम्म पुर्याएका छन, जसकाे अहिले जताततै व्यापक रुपमा विराेध भइरहेकाे छ ।
त्यसैगरि चर्चित नायिका करिष्मा मानन्धर पनि जातिय विभेद गर्नेकाे पक्षमा लागेकी छिन । उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा जातिय विभेद गर्ने घरभेटीकाे पक्ष लिएर आफ्नाे धारणा राखेकाे देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा नेताहरुलाइ तिखाे प्रहार गरेकै कारण चर्चामा रहेका पुर्व स्रचिव तथा अहिले नेपालमा गाँजा खेति गर्न पाउनु पर्छ भनेर देशभर अभियान थालेका भिम उपाध्याय त झन जातिय विभेद गर्नेकाे संरक्षण मात्रै हाेइन विभेद निम्त्याउने खालका अभिव्यक्तीहरु सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएका छन भने मिनेट मिनेटमा जातिहरुकाे हिंसा ल्याउने धारणा राख्दै आइरहेका छन जसले गर्दा सारा नेपालीहरु उनकाे चर्काे विराेध गर्दै आएका छन ।
यति मात्रै हाेइन उनले जातिय विभेदकाे कारण काेठा भाडामा नदिने घरभेटी सरस्वती प्रधानकाे खुलेरै समर्थन गरेका छन । पत्रकार रुपा सुनारले दलित थाहा पाएपछि घरभेटी सरस्वती प्रधानले काेठा नदिएकाे उजुरी दिएपछि प्रहरीले प्रधानलाइ नियण्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेकाे वेला नेकपा एमालेका नेता जसले आफुलाइ कम्युनिष्ट पाटीकाे भन्दै दनिया भाषण गर्दै हिड्छन उनै नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गाेपाल श्रष्ठले प्रहरी चाैकिमै गएर शक्तिकाे दुरुपयाेग गर्दै छुटाएर आफ्नै गाडिमा घर पुर्याएका थिए ।
उपाध्यायले सामाजिक सञ्जाल फेशबुमा विभेद गर्ने घरभेटिलाइ खुलेरै समर्थन गरेका छन भने पिडित दलितहरुकाे अपमान हुले शब्दहरु प्रयाेग गरेका छन । दलितले काेठा नपाउला वा सहयाेग नहाेला भन्ने डरले अपराधहरु लुकाउदै बस्नुपर्छ भन्ने उनकाे मनसायकाे व्यापक विराेध भएकाे छ । निष्पक्ष छानविनकाे माग गर्नु पर्नेका पुर्व सचिव उपाध्यायले सिधै दलित महिलाकाे दाेष देखाएर सम्पुर्ण दलितहररुकाे नैतिकता माथि नै आँच आउने गरि धारणा राखेकाे धेरैकाे गुनासाे छ ।
ज्याेती मगरकाे पाेष्टमा हजाराैँ कमेन्ट आएका छन जसमा धेरैले उनकाे समर्थन गरेका छन । सामाजिक अभियन्ताहरु मध्य पुर्व सचिव भिम उपाध्यायकाे धेरैले विराेध गरेका छन ।
भिम उपाध्यायले मिनेट मिनेटमा फेशबुकमा पाेष्ट गर्दै रुपा सुनारकाे विराेध गरेका छन भने जातिय विभेद गर्ने घरभेटीकाे खुलेर समर्थन गर्दै जातिय द्वन्द निम्त्याउने र दलितलाइ हाेच्याएर प्रस्तुत भएका थिए ।
भिम उपाध्यायले लेखेकाे एउटा स्टाटस यस्ताे रहेकाे छ ।
अब झन दलितहरूलाई काठमाण्डौँमा कसैले डेरा नदिने दशा लाग्यो । अति गरे खति हुन्छ, दुई दिनको चर्चा र अरूलाई दु:ख दिदा, थुनाउदा, हत्कडी लगाउदा आफू र आफ्ना बिरादरी पनि जीवनभरि प्रताडित भइन्छ भन्ने चेत अब खुल्नेछ। दलितदेखि होसियार भन्न थालेका छन्। यो निकै खराब संकेत हो।
कसैलाई डेरा चाहिए सरकारसंग माग्नुपर्छ। कसैले पनि जुनसुकै जातको किन नहोस्, कसैको निजी घरमा जबरजस्ति डेरा बस्न पाउनुपर्छ भन्नु कबाडी मगज हो। कानुन, पुलिस, प्रशासन वा वकिल भनेका समाजमा द्वन्द घटाउन हैन, द्वन्द झन् चर्काउनमा राम्ररी प्रशिक्षित हुन्छन् । विवाद हटाउन हैन बढाउनमा मजा लिन्छन्। द्वन्दका कारणले तिनको खल्ति भरिन्छ। तिनको शरण परेमा भएको सामाजिक सद्भाव पनि सोत्तर हुन्छ। दुर्भाग्य!
उनकाे याे धारणाकाे धेरैले विराेध गरेका छन । उनले दलितलाइ हाेच्याउदै अब झन काेठा नपाउने दशा लाग्याे भन्नु कथित ठुला जातले गरेका अपराधहरु सहेर बस्नुपर्छ भन्ने अर्थमा लिएर टिकाटिप्पनी हुन थालेका हुन अहिले सारा नेपालीले उनकाे साथ छाेडेका छन ।
त्यसैगरि चर्चित नायिका तथा हाल राप्रपा नेपालमा लागेर राजतन्त्रकाे पक्षमा उभिएकी करिष्मा मानन्धर पनि जातियताकाे सवालमा विवादित बनेकी छिन । के थियाे घटना ?
सरस्वती प्रधानले दलित भएको थाहा पाएपछि आफूलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरेको भन्दै पत्रकार रूपा सुनारले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसकै आधारमा प्रधानलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिएका थिए । प्रधानलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राखिने प्रहरीले जनाएको थियाे तर नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गाेपाल श्रेष्ठले सत्ताकाे दुरुपयाेग गर्दै प्रहरी चाैकिमै गएर अनुसन्धान विनै छुटाएका थिए ।
बिहीबार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिन गएकी सुनारलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले केही घन्टा कुराएको थियो । करिब पाँच घन्टापछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको उनले फेसबुकमार्फत बताएकी थिइन् । ‘१२ बजेदेखिको निरन्तर दबाबले ४ बजेर ५० मिनेटमा बल्ल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सफल भइयो । साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद । लडाइँ अझै बाँकी छ, उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन् ।
घरधनी प्रधानले कोठा भाडामा दिनुअघि जात सोध्दै दलित समुदायको भन्ने जवाफ पाएपछि भाडामा दिन इन्कार गरेको रूपाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीको माग गरेकी छिन् । यो ऐनबमोजिम कसुर प्रमाणित हुनेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाख रुपै याँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त, बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो ?